Dhageyso: Gabar Wariya Ah Oo Cod Satay Gargaar bini aadanimo – Qaran24
Dhageyso: Gabar Wariya Ah Oo Cod Satay Gargaar bini aadanimo
Qaraxii 28-October ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotelka Naasa-hablood2 ayaa waxaa dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen muwaadiniin Soomaaliyeed kuwaas oo ka akdhawaa goobta qaraxu ka dhacay.
Wariye Deeqo Cubeyd Maxamuud oo ka tirsaneed wariyaal ka howlgala Gobolka shabeelaha hoose waxaa ay ka mid ahayd dadkii dhaawacu kasoo gaaray Qaraxii maleeshiyaadka nabad iyo nolal diidka ah ee Al-shabaab ku weerareen Hotelka naasa-hablood2 ee magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho hasayeeshee Dalka wax looga qaban waayay.
Dhibbane Wariye Deeqo Cubeyd Maxamuud oo la hadashay Radio Muqdisho Codka Jamhuuriyad Soomaaliya ayaa faah-faahin ka bixisay xaladooda Caafimaad iyo sida ay wax usoo gaareen iyadoona sheegtay in laguw ar galiyay inaan xaaladooda caafimaad wax looga qaban karin.
Maxamed Ibraahim Macalimoow xoghayaha Ururku Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa ugu baaqay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee wax haysta in ay gacan ka gaystaan sidii caafimaad dibada ah u heli lahayd dhibbane Wariye Deeqo Cubayd Maxamuud.
Qaraxyada maleeshiyaadka nabad iyo nolal diidka ah ee Al shabaab ku weeraraan goobaha ay iskugu yimaadaan bulshadu ee ku yaala Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Dalka iyo gobolada Dalka ayaa khasaaraha ugu badan wuxuu kasoo gaaraa dadka hormuudka u ah bulshada sida Wariyaasha,Odayaasha,Macalimeenta iyo qeybaha kale.
Fadlan hadaad caawinayso ama aad hayso qof caawinaso kala xariir deeqa 0617876706
Halkaan hoose ka dhageyso Codka dhibane Wariye Deeqa Cubayd:
Previous PostPrevious Tiro Dad Ah Goor Dhow Cudurka Shuban Biyoodka Ugu Geeriyooday Magaallada Jowhar
Next PostNext Guddoomiyaha Golaha Shacabka JFS Oo Maqaamka Muqdisho Sheegay Inta Nuuc Uu Noqon Karo